Rosia · Aogositra, 2016 · Global Voices teny Malagasy
Rosia · Aogositra, 2016
Tantara mikasika ny Rosia tamin'ny Aogositra, 2016
Fifandraisana iraisam-pirenena 26 Aogositra 2016
Fahalalahàna miteny 22 Aogositra 2016
Mediam-bahoaka 22 Aogositra 2016
Sary Erotika Tamin'ny Gazety Mpanala Baraka Ahitana Vehivavy Kandidà Depiote ao Rosia
Fifidianana 19 Aogositra 2016
Tsy nety naneho hevitra ampahibemaso momba ny sary tafaporitsaka i Baronova, saingy nilaza izy fa ho faly "hiresaka momba ny tratrany" rehefa vita ny fifidianana.
Hehy 15 Aogositra 2016
Ny fihosenana amin'ireo vahoaka tsotra dia atahorana foana ho an'ireo mpanao politika, ary i Medvedev, izay ny tsy fisian'ny charme no tombony politika lehibe ananany, dia nitantana ny zava-nitranga tamin'ny fombany tsy ampy fitandremana efa mahazatra.
‘Ramatoa Polisy’ Rosiana Iray: Fizaràna Voalohany
Lalàna 14 Aogositra 2016
Tany ampiadohan'ity volana ity, nanoratra tamin'ny tambajotra Batenka.ru i Borisova mikasika ireo traikefany amin'ny maha-mpitandro filaminana azy. Mizara telo ny famoahanay ny lahatsorany. Ity no fizaràna voalohany.
Okraina 14 Aogositra 2016
Okraina 12 Aogositra 2016
Okraina 11 Aogositra 2016
Fifidianana 09 Aogositra 2016
Maneho ny fomba fijeriny momba an'i Donald Trump ireo Rosiana mpisehatra politika ety anaty media sosialy. Ny ankamaroany, toy ny tena akaiky kokoa an-dralehilahy io ry zareo-- noho ny antony maro samihafa mihitsy.